Jeneral Khalifa Haftar oo sheegtay hoggaanka Libya
Jeneral-ka fallaagada ah ee dalka Libya Khalifa Haftar ayaa Isniintii ku dhowaaqay inuu haysto “sharciyadda dadka” ee ah inuu dalka hogaamiyo, isaga oo sheegay inuu soo geba-geboobay heshiis siyaasadeedkii la gaaray 2015, wacadna ku maray inuu sii wadi doono weerarka uu ku qabsanayo magaalada Tripoli.
Khudbad uu ka jeediyey taleefishinkiisa Libya ee Al-Hadath TV, ayaa Haftar waxa uu ku sheegay in ciidankiisa isku magacaabay “Ciidanka Libya” ay “ku faraxsan yihiin in la siiyey sharciyad taariikhi ah” oo ay ku hoggaaminayaan Libya.
“Waxaan ku dhowaaqeynaa aqbalaadda rabitaanka iyo amarka ramsiga ee shacabka ee ah inaan soo geba-gebeyno Heshiiska Skhirat,” ayuu yiri isaga oo ka hadlaya heshiiskii 2015 ay QM dhex-dhexaadisay ee lagu soo dhisay dowladda Heshiiska Midnimada Qaranka (GNA).
Haftar ma uusan sheegin in baarlamanka ka dhisan Bariga dalka Libya, oo saxiixay heshiiska, ay taageersan yihiin tallaabada uu qaaday iyo waxa uu mustaqbalkoodu noqon doono.
Haftar ayaa sheega inuu sharciyad ka haysto maamul ka dhisan bariga dalka Libya, wuxuuna bishii April billaabay weerar uu magaalada caasimadda ah ee Tripoli ee galbeedka ku taalla uga qabsanayo dowladda lagu dhisay heshiiska midnimada.
Waxa uu Isniintii sheegay in ciidamadiisa “ay isku keeni doonaan shuruudaha lagama maarmaanka ah, si loo dhiso hay’adaha joogtada ee dowlad rayid ah.”
“Haftar waxa uu mar kale dunida tusay damaciisa kali-talisnimo,” ayuu yiri Mohammed Ali Abdallah.
“Hadda kadib iskuma dayayo inuu qariyo sida uu u neceb yahay xal siyaasadeed iyo dimoqraadiyad ay Libya hesho. Hadalkiisa caawa waa kii ugu dambeeyey, ficil naf la-caarinimo ah oo kasoo baxay nin laga adkaaday,” ayuu yiri.
Weerarka Haftar uu ku doonayo inuu ku qabsado Tripoli ayaa meelna u dhaqaaqi waayey, waxaana ku naf waayey boqolaal qof, ayada oo ay ku barakaceen qiyaastii 200,000 oo qof.